🥇 ▷ Bogga FIES ee ku yaal bogga shabakadda 'Caixa Econômica' wuxuu lahaa jabin nabadgelyo oo daran ✅
Bogga FIES ee ku yaal bogga shabakadda ‘Caixa Econômica’ wuxuu lahaa jabin nabadgelyo oo daran
1-da Luulyo ee sannadkan, farsamo-yaqaanka shebekadda Mateus Gomes ayaa helay bogga Maaliyadda Ardayda (FIES) bogga, kaas oo qayb ka ah Xariirka Federalka ee Qaaxa Econômica, si loo joojiyo adeegga, markii uu aqoonsaday jebinta amniga oo oggolaatay bogga kadib markii shaashadda galitaanka la arki karo in gebi ahaanba wax laga beddelo khafiifinta oo loo adeegsado khayaanada isticmaaleyaasha.
Sidee qaladka loo isticmaali karaa?
Nuglaanta, loogu magacdaray XSS farsamo ahaan, ama qoraal qoraal ah oo websaydh ah, ayaa lagusoo bandhigay bogga galitaanka FIES, kaas oo soo saara waxa ku qoran bogga xiga, sida magaca adeegsadaha. Dhibaatada ayaa ah in boggu aanu lahayn ka hortagga nambarka waxashnimada ah isla markaana laga faa’iidaysan karo oo gabi ahaanba dib loo habeyn karo si loogu adeegsado khiyaamada adeegsadayaasha si ay u waydiistaan ​​xog khaas ah oo loo diri doono kuwa wax jabsanaya halkii loo diri lahaa Caixa Econômica.
Hoos waxaa ku yaal tusaale bogan wax laga badalay oo keenaya farriin looga dhaadhiciyo adeegsadaha inuu dhiibo xogtooda si uu u soo cesho abaalmarinta la filayo.
Xigasho: UOL Tilt / Playback
Sida laga soo xigtay Gomes, wuxuu isku dayay inuu la xiriiro bangiga, laakiin kuma guuleysan. Kadib wuxuu xaqiijiyey guuldarrooyin ka timid madal madaxbanaan oo loo yaqaan Open Bug Bounty, oo ku takhasustay ogaanshaha nuglaanta internetka, ee soo saartay warbixin.
Warbixinta gacanta ku haysa, Gomes wuxuu ka warbixiyay guuldarrooyinka goobta Tilt, oo la xiriirtay shirkadda amniga ee dhijitaalka ah ee PSafe.
PSafe waxay u aragtay guuldaradu inay tahay mid daran
Waxay la xiriirtay Tilt, PSafe waxay u aragtay cilladdu inay tahay mid halis ah maadaama ay ku adkaan doonto xitaa antivirus-ka inuu u aqoonsado bogga wax laga beddelay sida iskuday khiyaanayn ah.
Xaqiiqdu waxay tahay in jabsaduhu uu isbedel ku sameyn karo bogga asalka ah, isagoo cinwaankiisa ku xiraya sanduuqa sidaas darteedna uusan shaki ku kicin dadka isticmaala ama faragalin ku sameeyo hawlgalka barnaamijyada amniga.
Tilt wuxuu uga digay Caixa nuglaanta Arbacada (28), kaas oo saxay bogga isla markaana dib u howl geliyay khamiista (29).